“Argagixisadu waa in aynu ka saarnaa Deegaanada Galmudug”…
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay Munaasabad ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb waxa uu diiradda saaray howlaha sugidda amniga iyo qorshaha wasaaraddiisa.
Waxa uu sheegay in aysan xili kaftan joogin Galmudug balse la joogo xaalad shaqo oo la doonayo in laga dabageeyo dowlad Goboleedyada kale ee ka tagay, lana doonayo dadaad dheeraad ah.
Axmed Macalin Fiqi Wasiirka Amniga Galmudug ayaa sheegay dadka ugu baaqay in aysan bixin lacagaha, Xoolaha ay ugu qaadaan Zakawaatka iyo wax waliba oo garabsiin u noqon karta, taa badalkeed waxa uu tilmaamay in maamulkooda ay mas’uuliyad ka saaran tahay sidii Al-Shabaab looga dulqaadi lahaa deegaanadooda sida uu hadalka u dhigay.
“Ka Wasaarad Amni ahaan, dadku waxa ay naga rajeynayaan in aynu ka dulqaadno Argagixisada, Shacabka ayaa soo qaylo dhaaminayo, xitaa haweenka umulayo waxa loo qaadaa deegaanada kale, waa in aan indhaha laga qabsan, laguna dhaqaaqo sidii aan gacan u saari lahayn” ayuu yiri Wasiir Axmed Macalin Fiqi.
Wasiir Axmed waxa uu isbarbar dhigay Xildhibaannada iyo wasiirada ku jira Dowlad Goboleedka Galmudug ee deegaanadooda Al-Shabaab heystaan iyo kuwa gacanta maamulka ku jira, waxa uu ka dalbaday in arrintaan ay qayb ka qaataan.
“Shacabku waa in ay sameeyaan Kacdoon ka dhan ah Argagixisada, waa in aan aas-aasano Ciidanka Booliiska iyo askarta kale ee Dowlad Goboleedka si Ciidamada Dowladdu ay noogu noqdaan kuwo na caawiyo, waa in isla xisaabtan daba socotaa howshaan oo dhammaan laga wada qaybgalo” ayuu yiri Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi.
Axmed Macalin Fiqi Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa gunaanadkii sheegay in waxqabad oo kaliya ay sugayaan shacabka ku sugan deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab, sidaas awgeed qorshaha 1-aad laga dhigo sugidda amniga iyo waxyaabaha la xiriira.
Another Kenyan plane shot down in Somalia, no casualties…